पाँच वर्ष खेर फालेकाले ओली अभियुक्त हुन् - गगन थापा - Mero Mechinagar
पाँच वर्ष खेर फालेकाले ओली अभियुक्त हुन् – गगन थापा
२७ वैशाख, काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँच वर्ष खेर फाल्ने कार्य गरेकाले अभियुक्त भएको टिप्पणी गरेका छन् । मतदातालाई ओलीले जवाफ दिने समय भएकाले ओली अभियुक्त भएको उनले जिकिर गरे ।
प्रधानमन्त्रीकै रुपमा भृकुटीमण्डपमा ओलीले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा कांग्रेसलाई धारेहात लगाउँदै पूर्व-पश्चिम गरिरहेको थापाले आपत्ति जनाए । चुनावी सभाको अन्तिम दिनमा भुकृटीमण्डपमा एमालेले सभा गरिरहेको छ । असनबाट गठबन्धनको सभामा बोल्दै गर्दा थापाले भने,‘अहिले भृकुटीमण्डमा बोल्दै गर्दा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीकै रुपमा बोलेको हुनुपर्ने हो कि होइन ? संसद भंग किन गरेको हो ? मूल झगडियाले माफी माग्नु पर्छ कि पर्दैन ?’
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले २२९ सडकका लागि शिलन्यास गर्दै गर्दा बजेट विनियोजन नगरी स्विच थिचेको बताए । कोरोना संक्रमणको समयमा ५ हजार जनतालाई बचाउन सकिने भएपनि ओली सरकारकै कारण ज्यान गएको उनले आरोप लगाए । ‘अहिले सजाय पाउने पालो एमालको हो’ थापाले भने ।
शीर्ष नेताको दौडधूप : प्रचण्ड-माधव कांग्रेससँग अझै आशंकित, ओली आशावादी